पुराना मेसिनको मर्मतसम्भार गरेर चलाउँदा फाइदा हुन्छ | Automotive News Nepal
पुराना मेसिनको मर्मतसम्भार गरेर चलाउँदा फाइदा हुन्छ ६ चैत, २०७६
तपाई यो ब्याबसायमा कसरी आउनुभयो ?
म सानैदेखी मेकानिकल पार्टस्का बारेमा जिज्ञासु थिए । सानै उमेरमा आफ्नो र साथीभाइको साइकल बिग्रियो भने आफै बनाउने गर्थे । त्यसपछि बुवाको इट्टा फ्याक्ट्रीमा प्रयोग हुने मेसिनहरुमा सानातिना खराबी आउँदा पनि म आफैले मर्मत गरिदिन्थे । यो क्षेत्रमा सानै देखिको रुचिका कारण पछि मैले भारतको आचार्य इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक सम्मको अध्यायन पुरा गरे । त्यसपछि नेपाल फर्किएर ५ बर्षसम्म ट्रेनी हुँदै जेसिबीको स्पेयर पार्टस् डिभिजनमा काम गरे । त्यहाँ काम गर्दै जाँदा मलाई हेभी इक्विपमेन्टको स्पेयर पार्टसका बारेमा झनै बढी जिज्ञासा बढेर गयो । सानै देखिको लगाब र जेसिबीमा काम गरेको अनुभवले मलाई यो ब्यवसायमा आउन प्रेरित गरेको हो ।
यो क्षेत्रको भबिष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?
नेपाल अझैपनि अबिकसित मुलुक भएको हुँदा यहाँ बिकास निर्माणका काम प्रशस्तै हुन बाँकी छ । जहाँ बिकास निर्माणको कुरा आउँछ त्यहाँ हेभी एबं कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टको काम पनि संगसंगै आइहाल्छ । यस हिसावले नेपालमा हेभी इक्विपमेन्टको स्कोप निकै ठूलो छ । हेभी इक्विपमेन्टको माग बढ्ने बित्तिकै यसमा लाग्ने स्पेयर पार्टस्को बजार पनि स्वत बढ्छ नै । यहि सम्भावना देखेर नै म यो ब्यवसायमा लागेको हुँ । अर्कोकुरा म आफै मेकानिकल इन्जिनियर पनि भएको हुँदा मेसिन र स्पेयर पार्टसको टेक्निकल कुरा पनि थाहा हुने नै भयो । जसले गर्दापनि मलाई यो क्षेत्रमा काम गर्न सहज भएको छ । अर्को कुरा हेभी इक्विपमेन्ट भित्र ब्याकहो लोडर, एक्साभेटर र रोलर बाहेक हाइड्रोपावर र टनेल जस्ता ठूला परियोजनामा प्रयोग हुने मेसिनहरु समेत पर्ने हुँदा यो क्षेत्रको संभावना नेपालमा निकै ठूलो देख्छु मैले ।
अर्बिट अर्थ मुभर्सको खास बिशेषता के हो ?
हामी गुणस्तरमा निकै सजग छौ । त्यसैले गुणस्तरिय पार्टसको मात्र कारोबार गर्दै आइरहेका छौ । त्यो पनि एकदमै सुलभ मूल्यमा । हामीले मुख्यत जेन्युइन र ओइएम गुणस्तरका पार्टसको कारोबारमा जोड दिएका छौ । ग्राहकलाई डुप्लिकेट पार्टस् प्रयोग गर्दै नगर्नुस भनेर सल्लाह दिन्छौ । केही रकम सस्तो पर्ने लोभमा डुप्लिकेट पार्टस प्रयोग गर्दा यसले मेसिनको अन्य मेजर पार्टसमा असर गर्न सक्छ । गुणस्तरहिन पार्टस् प्रयोग गर्दा मेसिन थन्किएर बस्नु पर्नेसम्मको अबस्था आउन सक्छ । यदि यसो भयो भने मेसिन धनीलाई ठूलै नोक्सान त हुने नै भयो साथमा परियोजनाको काममा समेत असर गर्छ । यसतर्फ ग्राहकलाई सचेत बनाउँदै गुणस्तरिय पार्टसको कारोबार गर्दै आइरहेको हुँदा हामीसंग कारोबार गर्ने ग्राहकहरु पनि सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ ।
बिकास निर्माणका लागि हेभी इक्विपमेन्टको अर्को कुनै बिकल्प छैन । त्यसैले नेपालमा हेभी इक्विपमेन्टको खाँचो भोलिका दिनमा झनै बढेर जाने निश्चित छ । तर हामीले मेसिन चाहिन्छ भन्दैमा हामीसंग भएका पुराना मेसिनको मर्मतसम्भार नै गर्न छाडेर नयाँ मात्र आयत गर्ने हो भने यसले देशको अर्थतन्त्रमा नै असर पु¥याउन सक्छ । नयाँ मेसिन खरिद गर्दा अर्बौ रुपैया बिदेशिने हुँदा बरु हामीसंग भएका पुराना मेसिनलाई केही रकम खर्चेर मर्मतसम्भार गरी चलाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । यसका लगि राज्यले स्पेयर पार्टस आयतमा लाग्दै आइरहको करमा कटौती गर्नुपर्छ । यदि यसो गरियो भने सस्तो मुल्यमै स्पेयर पार्टस अयात गरी पुराना मेसिनको मर्मतसम्भार गर्दै चलाउन पनि सकिने र नयाँ मेसिनका नाममा बिदेशिने ठूलो रकम समेत बचत हुन्छ । यसदे देशको अर्थतन्त्रमै सकरात्मक प्रभाव पार्छ ।
सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको कन्तबिजोग
काठमाडौं – लामो तथा छोटो दुरीमा चल्ने सवारीसाधनले यात्रुलाई निकै सास्ती दिएको पा...
सवारी कर : गतवर्षकै कायम
काठमाडौं - सरकारले यो वर्ष कुनै प्रकारको सवारी कर नबढाएको स्पष्ट गरको छ । बजेटमा...
काठमाडौं - सोसना ब्लिन्डर ५० वर्षदेखि लगातार व्हीलचेयरमा छिन् । पोलियोका कारण दु...